ရွှေနန်းတော် ရဲ့ ရွှေဝယ်ရွှေရ ကံထူးကြမယ့် မင်းဘူးမြို့ ရွှေပွဲတော် - Vloggest
ရွှေနန်းတော် ရဲ့ ရွှေဝယ်ရွှေရ ကံထူးကြမယ့် မင်းဘူးမြိ...
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ရွှေနန်းတော် စိန်ရွှေရတနာဆိုင် ရဲ့ ရွှေဝယ်ရွှေရ ကံထူးကြမယ့် ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ၂၀၂၀ ရွှေပွဲတော်ကြီ ကို ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့မှ (၂၆) ရက်နေ့အထိ သုံးရက်တိုင်တိုင် မင်းဘူးမြို့ရှိ ရွှေဝါဝင်းခန်းမကြီးမှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။
နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင် အောင်ထက် က ရွှေနန်းတော် ရဲ့ ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ မင်းဘူး ရွှေပွဲတော် သို့ ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့က တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ပရိသတ်များ နဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းများနှင့် အတူ မင်းဘူး ပရိသတ်တွေကို သီဆိုဖျော်ဖြေပေး ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေနန်းတော် ရဲ့ ရွှေဝယ်ရွှေရ ရွှေပွဲတော်ကြီး မှာ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်း မှ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း အထိ အထူးလျှော့ဈေးများ နဲ့ ရောင်းချပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဆွဲသီး (၂၅၀) ခု၊ ရွှေဆွဲကြိုး (၂၀) ကုံးနဲ့ ဗလာမပါငွေသား ကံစမ်းမဲတွေ အပြင် သိန်း (၇၀) ဖိုးနဲ့ အထက်ဝယ်ယူသူများ အတွက် နောက်ထပ် ငွေသား ကျပ် (၁) သိန်းကိုပါ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Grand Opening of Shwe Nan Taw 2020 Special Promotion Sales was held at the Shwe Wah Win Hall, Minbu on January 23. Myanmar Celebrity TV #ShweNanTaw #ForeverGemsbyShweNanTaw #AungHtet #ForeverGemsbyGoldenPalace
OMN: Sirna Eebbaa fi S...
How China Overtook The...
Çocuk Final bölümü 2. ...
Apple Store Employees ...